OLCreate: Am I ready to study in English - Myanmar အဆင့် ၉ နောက် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။
/ ► အဆင့် ၉ နောက် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။
ဓာတ်ပုံ: Karen Parker
အဆင့် ၈ [Tip: hold Ctrl and clickalink to open it inanew tab. (Hide tip)] ရှိ ဇယားကွက်ကို ဖြည့်ပြီးပြီဖြစ်၍ ယခုဆိုလျှင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချသော ဘာသာစကားအသုံးပြုမှု နယ်ပယ်များကို ကောင်းစွာသိလာပြီဖြစ်သလို ပိုအောင်းအောင်လုပ်လိုသော နယ်ပယ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်တန်းတွင်ပါဝင်သော လေ့ကျင့်ခန်းအချို့က အတော်ခက်ခဲမှုရှိလျှင်ပင် အခြားအထောက်အပံ့၊ အကူအညီများရှိပါသည်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိ ကျောင်းသားရေးရာအကြံပေး သို့မဟုတ် ကျောင်းဝင်ခွင့်အကြံပေးသူတစ်ဦးနှင့် ဆွေးနွေးမှုအတွက် ယခုဖြည့်ထားသော ဇယားကွက်ကို အခြေခံအဖြစ် သုံးနိုင်ပါသည်။
မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို ထပ်ပြီးစမ်းသပ်ရန် ဆန္ဒရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ စာမေးပွဲများသည် ယူကေရှိ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဆင့်တွင် လေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ရန် လက်ခံနိုင်သော အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Scottish Qualification Authority Standard Grade English (3 or above): http://www.sqa.org.uk.
International English Language Testing System (IELTS) hasasliding scale depending on which course you hope to access:http://www.ielts.org
Cambridge Certificate in Advanced English (pass):http://www.cambridgeesol.org
ယခုလေ့လာခဲ့သော မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု သင်တန်းမှအလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဆင့်တွင် လေ့လာနိုင်သည်များကို ဆက်လက် စုံစမ်းလိုစိတ် ပြင်းပြလာနိုင်ပါသည်။ Open University ၏ သင်တန်းအထောက်အကူများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန် ရနိုင်သော အရင်းအမြစ်များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံက မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုသင်တန်းတွင် ပါဝင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုကို ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းက အနာဂတ် ပညာရေးအစီအစဉ်များအတွက် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုရန် ပိုကောင်းမွန်သော အနေအထားတစ်ခုကို ရရှိစေခဲ့ပြီဟု မျှော်လင့်ပါသည်။